Ithegi: umxholo we-b2b | Martech Zone
Ithegi: umxholo we-b2b
Iqela lezoQoqosho lenze uvavanyo olunzulu kunye nohlalutyo lwesimo sengqondo seB2B kwaye yavelisa le infographic ngeziphumo. Ngombuzo ngamnye, kukho uthelekiso lwamagqala eshishini xa kuthelekiswa nesizukulwana esilandelayo sabathengi beshishini. Kuyathakazelisa ukubona umsantsa obalulekileyo phakathi kwezi zimbini. Ekuqwalaseleni izikhewu, kukho umahluko okhangayo kumagqala ezorhwebo afumana iingxelo zophando ziluncedo ngakumbi nge-35%! Amagqala eshishini, ngama-26%, achitha ubuncinci ezine
Amaqhinga okuthengisa e-B2B ka-2013 nangaphaya kwawo
NgeCawa, Agasti 11, 2013 NgoMgqibelo, Agasti 10, 2013 Douglas Karr
Xa sithetha neenkampani ezinceda abathengi, zihlala zibuza ukuba sisebenze naziphi na iinkampani ze-B2C. Xa sithetha neenkampani ze-B2B, bayabuza ukuba sisebenze neenkampani ze-B2B. Kukho konke ukunyaniseka, amacebo ayafana kakhulu… ngamanani nenkqubo yokuthenga eyahlukileyo. Nangona kunjalo, siyawubona umohluko kwinzuzo ngokuthenga. Iinkampani ze-B2C zihlala zincike kwicala levolthi ephezulu kakhulu kunye nengeniso ephantsi ngentengo nganye
Iindlela ezi-5 zokuBloga kweB2B
NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Douglas Karr
Kule veki ndisebenza kwintetho yeWebtrends Enage inkomfa. Umxholo wam ucacile kwaye ixesha elichaziweyo lifutshane kakhulu (imizuzu eli-10), ke, ndicel'umngeni wokuba ndenze intetho enye! Ndiceliwe ukuba ndithethe ngokuphumelela iBlogging ye-B2B. Ndizinciphisile izitshixo zeShishini kwiBusiness Blogging ukuya kwiindlela ezi-5 ezahlukileyo zokubonisa: Yiba ngaphambili. Akwanelanga ukubhloga, kuya kufuneka ubekhona